Home » Business Directory » Korea Auto Parts (ကိုရီးယားကားအပိုပစ္စည်းအမျိုးမျိုး ဖြန့်ချိရေး)
Email Address: donghwasangsa@gmail.com
Contact Number: Off: 09-250852178, HP: 09-250744478,09-43049884
Address: No.11/D, GF, Parami Rd, Near Parami Seinghyar, 16 Ward, Hlaing.
Listed: May 9, 2014 3:37 pm
ကျွန်တော်များ Donghwa Sangsa Co., Ltd.သည် ကိုရီးယားကားမျိုးစုံအတွက် ကိုရီးယားကားအပိုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ တိုက်ရိုက်တင်သွင်း ဖြန့်ချိပေးနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းများ လုပ်ငန်းအတွက် ကိုရီးယားကားအပိုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို တင်သွင်း ဖြန့်ချိရန် လိုအပ်ခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်ယူ၍ ရောင်းချလိုခြင်း၊ လက်လီ/လက်ကား ပြန်လည် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလိုခြင်း ရှိပါက Donghwa Sangsaမှ ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ စက်ရုံများမှ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် ၀ယ်ယူရာတွင် ရရှိသည့် ဈေးနီးပါးဖြင့် အကျိုးအမြတ်များစွာ မယူဘဲ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အဆင်ပြေအောင် ညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် အဆင်သင့် ရှိနေပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ်ယူလိုသူများ၊ လက်လီ/လက်ကား ပြန်လည်ရောင်းချ ဖြန့်ဖြူးလိုသူများအား ကျွန်တော်များ Donghwa Sangsa Companyမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုလျက်ရှိပါသည်။
နယ်မှ ပစ္စည်းမှာယူပါက အဝေးပြေးကားဂိတ်မှ တစ်ဆင့် ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
Ad Reference ID: 681536c681205de8
car accessories For Sale to sell
Listed by: Donghwa
Other items listed by Donghwa
Sale & Marketing -2 Post- (M/F)
Latest items listed by Donghwa »
All times are GMT 6.5. The time now is 3:03 pm.